Masar oo sheegtay in gacm adag ku qabaneso isku day kasta oo ku saleysan xiisado diimeed – SBC
Masar oo sheegtay in gacm adag ku qabaneso isku day kasta oo ku saleysan xiisado diimeed
Xukuumada Masar ayaa sheegtay in ay gacmo adag ku qaban doonto,ayna ciqaabi doonto cid kasta oo isku dayda in ay qayb ka noqoto isku dhacyada kooxeed,gaar ahaana u dhexeeya Masiixiyiinta Qibdiga iyo Muslimiinta Salafiga ee dalka Masar.
Wasiirka cadaalada Dowlada Masar C/casiis Al jundi ayaa bayaan kasoo baxay Xukuumada,waxaa uu kahor akhriyay Taleefishinka Qaranka,iyadoona sida uu sheegay ay xukuumadu go aan satay in la ciqaabo qof kasta oo lagu yuhmo in uu ka qayb qaadanayo isku dhacyada kooxeed.
C/casiis Al jundi waxaa uu sheegay in ay Dowlada Masar u aqoon sandoonto cid kasta oo gacan ka geysata isku dhacyada mid kasoo horjeeda Amniga Dowlada Masar,sidaa darteedna uu la kulmi karo xariga iyo weliba toogasho.
Hadalka Wasiirka Cadaalada Xukuumada dalka Masar ayaa kusoo aadaya wax yar kadib isku dhacyadii khasaaraha badan dhaliyay ee dhex maray Muslimiinta Salafiga ah iyo weliba Masiixiyiinta Qibdiga Dowlada Masar.
In ka badan 12 qof ayaa ku dhintay,tobanaan kalena waa ay ku dhaawacmeen isku dhacyada,waxaana jirta weli cabsi ku aadan in mar kale ay xoogaystaan isku dhacayada.